प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ: रवीन्द्र मिश्र - Dainik Online Dainik Online
प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ: रवीन्द्र मिश्र
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको बताएका छन ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन ।
विश्वासको मत नलिएका, विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न नमिल्ने बताएका उनले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यस पटक के निर्णय लिनेछ, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ। भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ!
— Rabindra Mishra (@RabindraMishra) May 22, 2021
३। देशमा महामारी छ। मान्छे मरिरहेका छन्। नागरिकहरू स्वयं औषधी, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसाहयलाई सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन्। सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्दैछ?‌+
१। विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्विकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्न मिल्छ?
२। देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमैँ पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन?‌+